Posted on February 25, 2013 by Aung Thu Htet	Thaing Wizard website ကို 12 Feb မှာ စတင် ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတာကြောင့် public ကို ချမပြဖြစ်သေးပါဘူး။ မနေ့က (24 Feb) မှာတော့ facebook ပေါ်မှာ စတင်ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အခြား social engineering website တွေမှာ ပါ ကြေညာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted in Uncategorized by Aung Thu Htet. Bookmark the permalink.	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...